Hordhac: Liverpool vs Porto – Kooxda Klopp Oo Ay Ugu Cad-cad Inay Gaarto Wareega 8-da %
Liverpool oo gacanta ku haysata faa’ido 5-0 oo ay kusoo badisay lugtii koowaad, ayaa waxay ku marti qaadi doontaa gurigeeda Anfeild dhigeeda FC Porto oo kasoo safreysa dalka Portugal, ee isla qaaradda Yurub.
Ciyaartaan waxay tahay mid ay sida iska cad Liverpool baashaali karto, maadaama muuqaal ciyaareedkeeda uu ahaa maalmihii lasoo dhaafay mid aan caadi ahayn, inkastoo ay wax badan isbedali karaan.
Sikastaba, waxaa iska cad in Liverpool ay usoo bixi karto wareega Sideed dhamaadka Champions League, hadii aysan mucjiso iyo wax Anfariir dhaliya la imaan kooxdii uu sanado ka hor koobkaan uqaaday Jose Mourinho.
Macalin Klopp, hogaamiyaha Liverpool ayaa wuxuu wacad ku maray in uusan wax nasiino ah siin doonin ciyaartaan hal ciyaaryahano, kaasoo ka tirsan kooxdiisa safka koowaad, islamarkaana uu ciyaarta kusoo wada bilaabi doono.
Kaliya, daafaca reer Spain ee Alberto Moreno ayaa wuxuu yahay midka ka maqan Reds, waxaana laacibkaan uu ku maqanaan doonaa ganaax ku dhacay mar sii horeysay, inkastoo Emre Can shaki laga gelinayo.
Geesta kale, kooxda Porto ayaa waxaa shaki laga gilinayaa inay heli karto ciyaartaan Sergio Conceicao, laakiin waxaa usoo noqonaya Felipe kadib hal kulan oo ganaax ah, inkastoo Moussa Marega uu dhaawac yahay.
Sidaa si lamid ah, waxaa ciyaartaan usoo laabtay Porto ciyaaryahankeeda muhiimka ah ee Vincent Aboubakar, kaasoo daafaca kooxda si weyn udhisa, sidoo kale, waxaa la rajeynayaa inuu kulankaan dheelo Iker Casillas.
Daafac: Alexander-Arnold(RB), Lovren(CB), Van Dijk(CB), Robertson(LB)
Khadka Dhexe: Can(CM), Henderson(CM), Milner(CM)
Weerarka: Salah(RF), Firmino(CF), Mane(LF)
Daafac: Maximiliano Pereira(RB), Felipe(CB), Marcano(CB), Dalot(LB)
Khadka Dhexe: Otavio(CM), Oliveira(CM), Herrera(CM), Brahimi(CM)
Weerarka: Aboubakar(RS), Tiquinho(LS)
Kulanka: Liverpool vs FC Porto
Champions LeagueLiverpool vs Porto
Hordhac: PSG vs Real Madrid – Labadan Kooxood Oo Dheelaya Lugta 2aad Ee Wareega 16 CL